Cutubka 27: Ilmaha Dhashay iyo Naas-Nuujinta - Hesperian Health Guides
HealthWiki > Cusub Meelaan Dhakhtari Joogin > Cutubka 27: Ilmaha Dhashay iyo Naas-Nuujinta
Saacadda ugu horeysa ee dhalashada kaddib, waxaad ka caawin kartaa sii jiritaanka iyo caafimaadka ilmaha ee muddada dheer:
Hubi inuu ilmuhu si fiican u neefsanayaan.
Diiri oo qalaji, jirkeeda iyo jirka hooyadu ha is gaareen.
Ka caawi inuu ilmaha billaabo naas-nuujinta.
1 Miyey ilmuhu si fiican u neefsanayaan?
1.1 Hadduu ilmaha jilicsan yahay, buluug yahay, ama uusan neefsaneyn
1.2 Ka samato-bixinta neefsashada
2 Ku diiri ilmaha - dusha jidhka hooyadood
3 Billow naas-nuujinta
4 Ilmaha shin dhimanka iyo ilmaha dhiciska ah
Miyey ilmuhu si fiican u neefsanayaan?
Marka ilmaha dhashaan, iyo markaad qalajineyso oo aad afka u saareyso naaska hooyadii, fiiri si aad u aragto hadduu ilmuhu inuu si fiican u neefsanayaan. Markaad si degdeg ah u sameyso sidaa, waxaad inta badan badbaadin kartaa ilmaha aan neefsaneyn.
Lugo xoogan iyo gacno
Si fiican u neefsashada, ama oohinta
Guduud tiq ah ama basali, ama buluug isu bedelaya, middab khafiif ah, ama bey
La xarbinta neefsiga, ama calaamo la'aanta neefsashada ama oohinta
Ilmahaan wuxuu u eg yahay inuu caafimaad qabo. Ilmahan wuxuu u baahan caawinaad deg-deg ah.
Hadduu ilmaha jilicsan yahay, buluug yahay, ama uusan neefsaneyn
Ha garaacin ilmaha.
Ka saar xabka ka imaanaya afka ilmaha adigoo si tartiib ah ugu tirayo fartaada oo ku duuban gabal maro oo nadiif ah. Ama isticmaal sariingo buuran dabinta soo nuugista si xabka ay afka dibada ugu soo saarto, nadiifi sanka.
Si adag kor iyo hoos uga salsalaax dhabarka ilmaha. Isticmaal shukumaan ama maro nadiif ah si aad isla markaa ugu diiriso uguna qalajiso ilmaha. Sidoo kale ka salsalaax salka hoose ee cagaha. Tani waa inay xanta-xanteysaa in ku filan oo ay u qaadataa neefasasho fiican oo xoogan.
Hadduu ilmuhu weli neefsaneyn, ama uu joojiyo neefsashada waa inaad siisaa ka samato-bixinta neefsashada.
Ka samato-bixinta neefsashada
Dhig ilmaha sagxad adag: miis ama dhulka. Ku xaji dhar hoosteeda oo qeyb ahaan ku dabool sidaasi ayay ku ahaaneysaa diirimaad.
Xoogaa kor u yara qaad garka ilmaha, sidaasi garkeeda wuxuu in yar u janjeeraa kor, xaga saqafka. Waxay ka caawin kartaa maro yar oo la isku laabay oo la hoos dhigo garbaheeda. Tani waxay ku xajinaysaa in ay dhuunteedaa u furanto neefsashada.
Ilmuhu waa inuu u jeestaa si toos ah, sidan oo kale. Sidan oo kale ma aha.
Afkaaga kala fur. Ku dabool faruurahaaga afka iyo sanka ilmaha.
Ku dabool afkaaga meesha wareegsan.
Waxaad isticmaali kartaa bac iyo dahaar intii afkaaga.
Ku afuuf hawo ilmaha. Isticmaal keliya neefsasho yar. Sii hal yar, afuuf hawo dhaqsi badan ilbiriqsi kasta 1 ama 2. Iska illaali inaadan u afuufin si adag, ama waxaad dhaawici kartaa sambabada yar-yar ee ilmaha.
Afuufid kasta, waxaad sugtaa daqiiqad oo uu ilmaha dibada u soo neefsado.
Haddii hawadu u muuqan inuusan galeynin, jooji. Kor u qaad garka ilmaha si aad u xaqiijiso inuu wejigiisa ku beegan yahay si toos ah kor oo dhuuntana ugu furan tahay. Kaddib markale isku day.
Haddii ilmuhu billaabaan inay ooyaan, ama uu neefsado ugu yaraan 30 neef daqiiqadiiba oo iskeeda ah, way FIICAN tahay hadda. Saar xabadka hooyadeeda, si ay u diiriso. Waxaa suurowda inay ladnaan doonto. Laakin indhaha ku hay dhawrka saacadood ee xiga. Miyey ilmuhu midab fiican yahay? Si fudud miyey u neefsanayaan? Haddii ilmuhu buluug noqdaan jirka iyo afka inta ku wareegsan, ama uu la xarbinayo inuu neefsado, caawinaad raadso.
Haddii 20 daqiiqadood kaddib samato bixinta neefsiinta, ilmuhuna billaabin inuu iskeeda u neefsato, waxaa suurowda inay dhimato. Haka dheeraan qoyska waqtigan murugada. Waxay u baahan yihiin feejignaantaada iyo daryeelkaaga.
Ku diiri ilmaha - dusha jidhka hooyadood
U dhig ilmaha maqaarka-maqaarka u saaraya hooyada.
Ku dabool ilmaha madaxiisa koofi ama buste.
Ilmaha dhashay waa in lagu xafidaa diirimaad iyo qaleyl. Kulka ka soo baxaayo jirka hooyada waxa uu diirinayaa ilmaha. Haka kaxeyn ilmaha hooyadood si aad u soo baarto ama aad ugu soo mayrto. Ilmuhu uma baahna isla waqtigaa in loo meyro - meyriduna waxay u keentaa qabow halis badan. Ma jirto sabab loo kala kaxeeyo ilmo iyo hooyadood - ilaa aad ka siineyso neefsiin samato bixin mooyaane.
Qalaji ilmaha inta aad sii saareyso korka hooyadeed.
Ku diiri ilmaha adigoo saaraya, ayagoo qaawan, xabadka hooyadood oo feedan. Kaddibna labadooduba ku dabool buste ama maro. Sida ugu dhaqsiyaha badan uga bedel bustooyinka kuwo qalalan waayo maro qoyan waxay dhaxan u keenaysaa ilmaha.
Haddey noqoto in hooyada loo diro isbitaal, ama sababo qaarkood oo aysan ilmaha hayn karin, aabbaha ama xubin kale oo qoyska ka mid ah ayaa ilmaha ku hayn kara ayagoo maqaarka-maqaarka u saaraya.
Ilmaha waxaa laga doonayaa inay hurdaan ugu yaraan saacad dhalashadooda kaddib. Ilmuhu waa in la naas-nuujiyaa inta aysan seexan kahor. Sidaasi haddii isla markaas aan la jaqsiin, iskuday inaad u soo listo xoogaa dhibco ee caanaha dambarka hooyada ee ku qoy faruuraheeda si ay ugu xiiseyso. Ama ku xanta-xanteey dhabanada ilmaha ibta naasaha hooyada. Wax kale ma xaqiijiyo caafimaadka ilmaha aan ka aheyn naas-nuujinta. Wixii intaa dheer ee naas-nuujinta iyo muhiimada ay leedahay siinta caanaha ugu horeeya, waxaa loogu yeeraa dambar, guji halkan.
Ilmaha shin dhimanka iyo ilmaha dhiciska ah
Ku xafid ilmaha dhiciska adigoo maqaarka-maqaarka u saaraya dhawrka usbuuc ee hore.
Cunug ku dhashay shin dhiman ama dhicis ah wuxuu u baahan yahay feejignaan badan.
Shin dhiman waxaa loola jeedaa ilmaha ku dhalasha uurka 8½ bilood kahor.
Dhicis waxaa loola jeedaa ilmaha miisaankoodu ka yar yahay 2.5 kiilo (5½ culaab).
Ama haddaba iska eeg ilmaha: ma u muuqdaan inay dhicis yihiin ama caateysan yihiin?
Ilmahani waxay u baahan karaan caawinaad si loogu billaabo naas-nuujinta oo loogu dhawro diirin. Waxay si aad u fudud qaadi karaan caabuqyo iyo dhibaatooyin kale oo caafimaad.
Ku xafid ilmaha adigoo maqaarka-maqaarka u saaraya, oo koofiyad ugu jirto si uu u diirsado. U toosi ilmaha si ay u naas-nuugaan 2 saacadoodba hal mar ilaa ay ka xoogeystaan oo ay ka buurnaadaan. Haddii ay dhib ku qabaan naas-nuujinta, sii in yar oo caanaha naaska ah ugu shub koob ama qaado. Si aad u barato sida gacanta looga soo liso caanaha - ee koob ku quudinta - guji halkan.
Waxaa laga keenay "http://so.hesperian.org/w/index.php?title=New_Where_There_Is_No_Doctor:Cutubka_27:_Ilmaha_Dhashay_iyo_Naas-Nuujinta&oldid=36"